Breaking News Archives - Page 13 of 13 - News20 Media
Oct102021 by N20No Comments
मन्त्रीहरुलाई माधव नेपालले अकस्मात सरकारबाट फिर्ता किन बोलाए ?
काठमाडौँ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्ना पार्टीबाट मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको हल्ला चलेपछि केही समय नेताहरुलाई तनाव भएको छ । नेपालले बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाएको विषयलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको भन्दै हल्ला चलेको थियो । पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई बोलाइएको स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले पुष्टि गरे । अध्यक्ष नेपालले आइतबार विहान ११ बजे बानेश्वरको आलोक नगरस्थित पार्टी कार्यालयम बोलाएको मन्त्री खतिवडाको भनाई छ । जनपक्षीय काम गर्न निर्देशन दिनका लागि अध्यक्ष नेपालले बोलाएको उनको भनाइ छ । शनिबार अध्यक्ष नेपालले पार्टीबाट मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीलाई पनि राम्रो काम गरेर देखाउन निर्देशन दिएका थिए । एकीकृत समाजवादी काभ्रेपलाञ्चोकको जिल्ला पार्टी कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा गलत काम गरेको खण्डमा मन्त्र...
प्रचण्डकाे ओलीलाई चेतावनी : अझै पनि चलखेल गरे राननीतिबाटै बाहिर निकालिदिन्छु
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिबाटै बाहिर निकालिदिने चेतावनी दिनुभएको छ । आफ्नो पार्टी र आफूसँग धोका दिएका कारण ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पु¥याएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष दाहालले फेरि पनि चलखेल गरे राजनीतिबाटै बाहिर निकालिदिने चेतावनी दिनुभयो । पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटनको क्रममा अध्यक्ष दाहालले हिन्दीमा भाषण गर्दै गर्नुभएको थियो । ‘ओलीको घमण्डका कारण गण्डकी र लुम्बिनीको सरकार गुम्यो, २/४ दिनमा बागमती र प्रदेश १ बाट पनि बाहिरिँदै छ,’ उहाँले हिन्दीमै भन्नुभयो, ‘अब पनि चलखेल गर्न खोजे राजनीतिबाटै बाहिर गर्दिन्छु ।’ ‘मधेसी जनता मेरा प्रेमिका हुन्, कहिलेकाहिँ भिलेन आएर तोड्न खोन्छन्,’ मधेसी जनताको अधिकारका लागि आफू संघर्षरत रहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘तर, म निरन्...
Oct92021 by N20No Comments
काठमाडौँ । कुनै पनि व्यक्तिको पैसासँग जोडिएको इच्छा कहिले पुरा होला ? धनकी देवी महालक्ष्मीको कृपा कहिले मिल्ला ? यो जान्नका लागि ज्योतिष शास्त्रमा केही संकेतबारे उल्लेख गरिएको छ। मान्यता छ कि जहिले पनि यस्ता संकेत देखिन्छन्, त्यतिबेला सभ्झिनु पर्छ कि व्यक्तिलाई धनकी देवी लक्ष्मीको कृपा मिल्नेवाला छ। यस्ता छन् संकेतहरुः –बिहानै उठेर तपाईको पहिलो नजर दुध या दहीले भरिएको भाँडोमा पर्छ भने सम्झनुहोस् केही शुभ हुनेवाला छ। –विहानै शंख, मन्दिरको घन्टीको आवाज सुनिनु पनि शुभको संकेत हो। –यदि कुनै व्यक्तिलाई विहान उठ्नेवित्तिकै उखुको बोट तथा उखु देखिन्छ भने पनि भिवष्यमा धन सम्बन्धी मामलामा सफलता प्राप्त हुने छ। –यदि कुनै व्यक्तिलाई सपनामा पटक-पटक पानी, हरियाली, लक्ष्मीको वाहन उल्लू देखिन्छ भने सम्झनुहोस् कि आउने समयमा तपाईको धनसम्बन्धी सबै समस्या हट्ने छ। –यदि तपाई कुनै काम विशेषका...
चम्किदैछ यी राशिको भाग्य, तपाईको कुन ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
आफ्नो आगामी भविष्यका बारेमा थाहा पाउने चाहना सबैको हुन्छ । राशिफलले पनि तपाईको आगामी दिनको संकेत गर्दछ। त्यसैले हामीले यहाँ साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गरेका छौँ । यो साता केही राशिको भाग्य चम्किदैछ भने केही राशि सावधान रहनुपर्ने देखिन्छ। आउनुहोस् हेरौँ साप्ताहिक राशिफलः मेषः तपाईंका लागि यो साता मिश्रित फलदायक छ । शनिबार, मंगलबार र बुधबार धनलाभ, सुखशान्ति, कार्य सफल होला । कोसेली, पुरस्कार प्राप्ति, साथीभाइबाट सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ । खाद्यान्न प्राप्तिको समेत सम्भावना छ । तर बाँकी दिनहरु त्यति उपलब्धिमूलक देखिँदैनन् । चोटपटक, स्वास्थ्य समस्या, आँखामा समस्या आउन सक्छ । साथै आम्दानी कम हुँदा खर्च धान्न धौ–धौ पर्ला । वृषः तपाईंका लागि यो साता मिश्रित फलदायक छ । साताको शुरु शनिबार रोगव्याधिको भय, धननाश हुने देखिन्छ । साताको मध्यभाग मंगलबार र बुधबार आर्थिक भार बहन गर्न गाह्रो पर्ला । ...
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको एउटै घोषणाले देशभरका सैनिकहरुमा छायो खुसीयाली !
काठमाडौं – प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको घोषणाले देशभरका सैनिकहरुमा खुसीयाली छाएको छ । नियुक्त भएदेखि नै सैनिकको मन जित्ने काम गर्दै आएका उनले अर्को प्रशंसायोग्य घोषणा गरेका हुन् । नेपाली सेनाले दशैं विदामा घर फर्किने आफ्ना कर्मचारी र उनीहरुका परिवारलाई बस र हवाइ जहाजबाट निःशुल्क पुर्‍याई दिने भएको छ । असोज १८ गतेदेखि असोज ३० गतेसम्म सबै दर्जाका सैनिक कर्मचारी र उनीहरुको परिवारलाई बस तथा हवाइ यातायातबाट पुर्‍याउन लागेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिए । सेनाको कल्याणकारी सुविधाअन्तर्गत घर बिदामा जाने बहालवाला सैनिक र उनीहरुका परिवारलाई सो सुविधा दिन लागिएको हो । प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले आफ्नो पद बहालीसँगै सकल दर्जा र आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी सुविधा थप गर्ने घोषणा गरेका थिए । नेपाली सेनाले दशैंमा आफ्नो गाउँ फर्कन चाहने सैनिकका आश्रित परिवारलाई बस र हेल...
Oct52021 by N20No Comments
विशव्यापी ६ घन्टाकाे अवराेधपछि फेसबुक , ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र म्यासेन्जर पुन सुचारू !
काठमाडौं-सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका साथै ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र म्यासेन्जर डाउन भएका छन् । फेसबुकको स्वामित्वमा रहेको सबै एप डाउन भएका थिए । सोमबार राति ९:२५ तिरबाट विश्वभर फेसबुकका, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र म्यासेन्जर डाउन भएका थिए । विश्वभरका थुप्रै प्रयोगकर्ताले यस एपमा समस्याको सामना गर्नुपरेको थियो । अनलाइन सेवामा आधारित सर्भर ट्र्याक गर्ने स्वतन्त्र वेबसाइट ‘डाउन डिटेक्टर’का अनुसार यो आउटेज समस्याका कारण लाखौं प्रयोगकर्ताले म्यासेज आदान प्रदान गर्न पाएका थिएनन । डाउन डिटेक्टरमा गुनासो गर्ने आधाभन्दा धेरै प्रयोगकर्ताहरुले सन्देश प्राप्त गर्न नसकिरहेको उल्लेख गरेका छन्। मंगलबार बिहान भने यी सेवाहरू पुन सुचारू भएका छन् । फेसबुकका सिइयो मार्क जकरबर्गले फेसबुकका साथै ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र म्यासेन्जर अनलाइन भैसकेको जानकारी दिएका छन् ।...
Oct32021 by N20No Comments
माओवादीले टुंग्यायो मन्त्रीको नाम ! को-को बन्नेभए ?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको बारेमा आज छलफल गर्दैछ । मन्त्रीहरुबारे छलफल गर्न आज स्थायी कमिटी बैठक बस्ने तयारी छ । तर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले बैठक बस्ने कुरा भए पनि समय तय नभएको बताए । ‘काम नसकिएकाले आज बैठक बस्ने कुरा त हो, तर समय तय भइसकेको छैन,’ ढकालले भने । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर बैठकको समय निश्चित गर्ने उनले बताए । शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिंदै प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले आइतबारको बैठकमा मन्त्रीहरुबारे छलफल गर्ने बताएका थिए । सत्ता गठबन्धनका दलहरुको असोज ६ गते बसेको बैठकमा एक साताभित्र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भएको थियो । तर, मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन । गत असार २९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्र...
असोज, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले नेपाल बाहिरका देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुका लागि पनि दशैंको टीका लगाउने उत्तम साइत तयार पारेको छ । समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. माधवप्रसाद भट्टराईका अनुसार धेरै नेपालीको बसोबास रहेका क्षेत्रबाट माग भएबमोजिम सम्बन्धित देशको ग्रहको दृष्टि अनुसार टीका लगाउने समय यकिन गरिएको जानकारी दिए । समितिका अनुसार नेपालमा भने असोज २९ गते बिहान १० बजेर २ मिनेटमा दशैंको टीका लगाउने उत्तम साइत छ । भारतको देहलीमा १५ अक्टोबरको दिन बिहान ९ बजेर ५ मिनेटमा टीकाको उत्तम साइत निर्धारण गरिएको छ । अमेरिकाको न्यूयोर्क, केन्टुकी, टेक्सास र क्यालिफोर्नियामा बसोबास गर्दै आएकाहरुका लागि १५ अक्टोबरको दिन अलग–अलग साइत जुराइएको छ । न्यूयोर्कमा बिहान ९ बजेर २१ मिनेटमा, केन्टुकीमा बिहान ८ बजेर ४५ मिनेटमा, टेक्सासमा ८ बजेर १५ मिनेटमा र क्यालिफोर्नियामा बिह...